LEENSAA GUDDINAA TUMSAA: QEERRITTII MUL’ATA ABBAA DHUGUUMSITE. – Beekan Guluma Erena
LEENSAA GUDDINAA TUMSAA: QEERRITTII MUL’ATA ABBAA DHUGUUMSITE.	Beekan Guluma Erena
Poems, Seenaa May 1, 2016May 1, 2016OROMO
379SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
LEENSAA GUDDINAA TUMSAA:
QEERRITTII MUL’ATA ABBAA DHUGUUMSITE.
Goonni kan du’ee dabre qofaa miti. Kan hojii fakkeenyummaa taatuufi bu’a qabeessa tahan sabaaf hojjatan, kan lubbuun jiraniis goota. Arra seenaa gabaabduu tokko hayyittii teenya lubbuun jirtu, tan hojiilee danuu saba isiitiif hojjatte takkaa waliiniin wal isin barsiisa. Leensaa Guddinaa Tumsaa, hundeessituu dhaabbata Guddinaa Tumsaafi kan biroo tahuun hojii danuu isiin gumaachite keessaa muraasa tuqeen isiniin gahuuf yaala. Hanga xumuraatti na faana bu’aan afeerraa kooti.
Luba Guddinaa Tumsaa qabsoo Oromoo ijaaruu fi jabeessuu, afaan oromoo dagaagsuu, Oromiyaa fi Oromoo mul’isuu keessatti hayyoota qooda olaanaa bahan keessaa tokko turan. Guddinaan goota miidhaa sabaa onnee irraa jibbuufi mootummaa saba oromoo miidhu kamuu kan balaaleeffatu, hayyuu mul’ata guddaafi kaayyoo qajeelaa qabu yoo tahu qabsaa’oota jajjaboo qabsoo oromoof warraaqaa turan, kanneen bilisummaa Oromoo arguuf xiiqiin hojjatan, warreen walabummaafi guddina ilmaan oromoo osoo hawwanii, hawwii qofa osoo hin tahin warraaqsa finiinsaa turanii dha. Osuma sabboontoota fakkaatoo isaanii waliin sochii warraaqsichaa finiinsanii mootummaa galaafamaafi balaafamaa Dargii harka bu’uun waan saba isaaniitiif hojjataniif, mirga saba bal’aa kan waggoota baayyeef ukkaamamaa ture waan gaafatan qofaaf qabamanii galaafataman keessaa isa tokko ture. Isa qofaa miti. Obboleessi isaa sabboonaan, goota sabboonummaa leellise, leenci onnee qeerreensaa Baaroo Tumsaatiis nama qabsoo Oromoo keessatti gumaacha guddaafi daaddaa hin qabne laachaa turee, booda lubbuu isaa takkittii oromoof laatee wareegamee dabree dha.
Eegaa! “Ilmoon leencaa leencuma, dameen odaa oduma malee dambii wahii taatiiree?” Gonkuma odaan dambii hin tahu. Kan jecha kana mirkaneessite dhalli leencaa, dameen latiinsa gootootaa, Sabboontuun onnee qeerreensaa, qaroo sammuun qaroominaan badhaate, jaalattuufi quuqamtuun fooniif dhiiga isii Aadde Leensaa Guddinaa, abbaa isii goota kutataa du’a hin sodaanne, Guddinaa Tumsaafi Harmee isii adde Tsehay Tolosaa gidduu argamte. Maatii isii qofaaf osoo hin tahin sammu qabeettii, amala toleettii intalaa taatee ergama dhiiga Oromoo keessa jiru baadhattee saba isiitiif gara ardii tanaa dhufte. Dhuftees maatii sabboontootaafi onnattoota keessatti guddina jireenya isii jalqabde. Mul’anni abbaa isii keessa ture, kan eenyulleen amantii kamuu hordofuus saba isaatiif waan gaarii hojjachuu qaba jedhu san Leensaa keessattiis akka biqiltuu odaa margee guddina isii waliiniis akeekni isiis daran guddachaa, mul’anniis dagaagaa deemuu jalqabe.
Gaafa abbaan isii Guddinaa Tumsaa mootummaa Dargiitiin bara 1979 qabamee gara mana hidhaa geeffamu Leensaan gashaantii waggaa 17 turte. Abbaan isii yeroo baayyee qabamee hidhamee akeekkachiifamee gad lakkifamaa ture. Guddinaa Tumsaa akka ajjeefamuus osuma beekuu garuu du’a sodaa falmii mirga namoommaa kan dhiisu hin taane. Guyyaa tokko immoo haadha mana isaa waliin mana amantaatii gara mana isaanii osoo galaa jiranii humna waraana mootummaa Dargiitiin fuudhamanii achi buutee tahan. Osoo baayyee hin turiin harmeen isii Aadde Tsehay Tolosaas qabaman. Luba Guddinaa Tumsaa torbuma qabame keessa mootummaa nama nyaataa dargiitiin kan ajjeefame tahuus garuu du’uun isaa maatiif ifatti kan beekkame bara 1991 keessa akka ture himama.
Sababa qabamee dhabamuu abbaa isaanii kanarraa ka’uun miidhaa biyya keessa yoo turan irra gahuu malu shakkuun obboleessa tokkoofi Obboleewwan durbaa lamaa waliin biyya ormaatti baqattoota ta’an. Leensaaniis biyya Jarmaniitti baqattummaan galtuus garuu biyyi Jarmanii kun harka diriirsitee, fuula hiiktee hin simanne. Jarman nyaara guurtee, fuula hiitee oodaa simachuun kun Leensaaf hin taane. Jireenyi hadhaa’ee Awrooppaa isii jibbisiifnaan, Jarman teessee biyya Amerikaatti kolugaltummaa gaafatte. Kuniis yeroo tokkotti kan milkaa’uuf hin taane. Jireenyi garuu itti fufe. Isiiniis yaalii isii ittuma fufte. “Deddeebi’ii keessa haadni dhagaa mura” akkuma jedhamu san yaalii dheeraa booda milkaa’eefii gara biyya Ameerkaa galte. Wanni hin dabare hin jiru, barri rakkinaa saniis akka qocaatti tirachaallee tahu dabruu hin oolle. Dhawaatumaan shorroqaa dabre.
Baqattummaan hangam gubduufi hifachiiftuu akka taate tan hubatte Leensaan, akkuma Dr. Ali Birraan “Miila taha malee garaan biyyaan bahu” jedhe san qaamaan biyya Ameerkaa teessee garaafi qalbiin biyya isii Oromiyaa yaadaa turte. Qaamaan jireenya gaarii keessa jiraattuus qalbiin isii saba isii kan gabrummaan gubdu waliin gubachaa, kan hoongeen beelaa yarachiiftu waliin yarachaa, kan dhibeen araraaftu waliin araraafamaa eega turtee booda yoo humni mootummaa dargii raafamu guyyaan abjuuf hawwii ganamaa itti hiikamuufi yaadannoon mul’ata abbaa isii itti dhugoomuus dhihaachuu hubattee, galaa imalaaf tahu guduunfachuu jalqabde. Halkan hammaatee dheeratuus bariin hin oolu waan taheef, aduun duumessaan golgamtuus akkuma tahe tahee bara 1991 mootummaan Dargii aangoo irraa barbadaa’e.
Barreessaan: Saphaloo Kadiir | Abdulbasit
Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa379SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
← ABBICHUU-Seena matuma dagatamuu hindandeenyedha.
FOON FOON IRRAA CITTU →